Kulaylka wajiga ugu fiican Xilliga Xagaaga Hindiya! Hubi Halkan! - ALinks
Nidaamka daryeelka maqaarka ee caadiga ah ee 3-da ah ee aan raacno. Waxaa ka mid ah nadiifinta, qashinka, qoyaanka. Laakiin inteena badani ma isticmaalno toner. Maaddaama aysan muhiim ahayn in la nadiifiyo oo la qoyo oo laga boodboodo. Toner waa, weli, cunsur aad muhiim ugu ah nidaamkeena daryeelka maqaarka.
Waxay hubisaa in jirkeennu nadiif yahay, biyo u adkaysta, caafimaadna qabo. Toner sidoo kale waa in lagu doortaa iyadoo loo eegayo nooca maqaarka. Sida dhammaan waxyaabaha kale ee lagu daryeelo maqaarka.
Halkan maqaalkan, waxaan ku soo bandhigi doonnaa liisaska toners loo isticmaalo kuleylka Hindiya. Toners-kaani waxay soo saaraan saliida dheeriga ah waxayna nadiifiyaan daloolada nadiifka ah.
1. Wow Sayniska Maqaarka Vitamin C Toner
Muxuu dhahaa toner-ka wajiga leh?
Kaga bogsow maqaarkaaga SOW Sayniska Maqaarka Vitamin C Maqaarka Maqaarka Toner. Waa qoyaan iyo dib u soo nooleyn kara nebula wajiga. Taasi waxay ku siinaysaa maqaar siman oo qurux badan. Buufintaani waxay ku siineysaa faa'iidada labalaabka ee toner iyo ceeryaanta.
Toner ah oo biyo siiya oo sifeeya wasakhda hartay.
Waxay siinaysaa faa'iidada laba-geesoodka ah ee toner iyo ceeryaanta wejiga. Waxay ku jirtaa liinta iyo liinta saliidaha lagama maarmaanka ah, sixir badeedka, iyo aloe vera.
Neefta nebula waxay bixisaa dib u soo celinta maqaarka caajis ah. Waxay gacan ka geysaneysaa maqaarka iyo muuqaalka maqaarka, taasoo ka dhigeysa mid dhalaalaya oo cusub.
Nebulaani waxay maqaarka ka nadiifisaa iyadoo ka saareysa haraaga is qurxinta iyo wasakhda kale. Waxa kale oo ay dhawaaqaysaa daloolada iyada oo aan laga qalajinayn maqaarka maqaarka.
Tonerkani wuxuu diyaariyaa maqaarka si qoyaanka iyo rehydratesku ay sifiican uqaadaan. Waxay ka caawisaa soo celinta xaydha dabiiciga ah iyo uumiga maqaarka.
Muxuu sheeganayaa toner wajigan?
Toner-ka wajiga ayaa loogu talagalay maqaarka dufanka leh. Waxaa ka buuxsamay qajaar iyo soosaarasho caleen basil. Waxay kaa caawinaysaa inaad nadiifiso maqaarkaaga oo aad ku daadiso wasakhda godadkaaga adoo marinaya qoto dheer maqaarkaaga. Iyada oo gacan laga helayo Waxyaabaha laga soosaaray Qajaarka, tonerkani wuxuu ku siinayaa dareen fiican maqaarkaaga.
Hoos u dhac weyn oo ku yimid cuncun iyo casaan. Sifooyinka ka hortagga bakteeriyada ee soosaarka Caleenta Basil ee ku jira tanerkan. Si aad uga ilaaliso maqaarkaaga wasakhda iyo noolaha banaanka.
3. Xabad Plum Toner Shaaha
Taan-beelka tubtaani waa khamri la'aan. Waa inaad ku dartaa tan nadiif, jilicsan, iyo maqaarka midabka leh.
Waxaa laga yaabaa inaad isku aragto ciriiri maqaarkaaga - oo ku habboon daloolada ballaaran.
Soosaarida shaaha dabiiciga ah ee ka hortaga cilladaha iyo finanka. Iyo fuuq bax fudud oo leh glycolic acid wasakh ah iyo unugyo dhintay. Khamri-la’aan 100 boqolkiiba!
4. Biotique Bio Cucumber Pore Adkaynta Toner
Muxuu sheeganayaa maqaarkan wajiga toner?
Tan-tan cusboonaysiinta ayaa laga helay buuraha Himalayas. Waxaa lagu qasan yahay qajaar, koryander, lowska, berberka, iyo saliida basbaaska. Isku-darka ayaa u oggolaanaya maqaarka inuu isku dheelitiro pH-kiisa isla markaana wuxuu ka caawiyaa sidii loo ilaalin lahaa maqaarka saafi ah.
Qajaar waa qaboojiye muhiim ah iyo daahirinta dhirta.
Waxay hoos u dhigtaa bararka maqaarka iyo daalka. Waxay dib u soo celisaa nabarradii iyo midabkii maqaarka dabiiciga ahaa. Qajaarku wuxuu kaloo gacan ka geystaa hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka. Waxay hagaajinaysaa maqaarka maqaarka iyo nafaqada maqaarka.
Qiimaha Nolosha ee Venezuela
Immisa Immisa Qiimuun ah In La Safro Boqortooyada Ingiriiska? Fiiri muuqaal !!